November 2019 – Kalfadhi
November 30, 2019 November 30, 2019 Hassan Istiila
Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa sheegay in ay sameyeen Guddi xaqiiq raadin ah oo warbixin dhameystiran ka keena Xildhibaan sheegay in laga xayiray safar ay ku aadi laheyd gobolka Gedo. Xildhibaan Daleys Xasan Aadan, ayaa fadhigii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka ku sheegtay in 25-kii bisha laga hor istaagay in ay ka dhoofto garoonka diyaaradaha Muqdisho. Warqad qoraal ah oo ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo loo diray Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha ayaa lagaga dalbaday in muddo labo todobaad gudahood Baarlamaanka ku hor-keenaan warbixin dhameystiran…
November 30, 2019 Hassan Istiila
Ku-simaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa qaabilay ku xigeenka Madaxa Xafiiska Hawlgalka Kaalmeynta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) ahna Ku-xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Raisedon Zenenga iyo mas’uuliyiin kale oo isla xafiiskaas ka tirsan. Labada dhinac ayaa waxaa ay ka hadleen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin Doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo 2020/2021 iyo sidii loo Fududeyn lahaa dhamaan shuruucda muhiimka u ah howlaha doorashooyinka oo uu…
November 28, 2019 Hassan Istiila
Kulanka wadajirka ah ee labada Aqal ee Baarlamaanka Dalka oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaa goob joog ka ahaa Guddoomiyeyaasha labada Aqal iyo sidoo kale ku-xigeenadooda. Kulanka oo uu shir Guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ajendaha kulanka ahaa meel marinta Habraaca Ansixinta dib u eegista Dastuurka. Waa maxay faa’iidooyinka Nidaamka Aqlabiyadda ? Habka faa’iidooyinka Nidaamka Aqlabiyadda wuxuu si xoogleh u abuurayaa matalaada deegaanka ee ka dhaxaysa xildhibaanka iyo bulshada deegaanka.…
Cabdi Qeybdiid “Kalfadhiga 6-aad yaan la xirin ilaa Dastuurka laga ansixiyo”
November 27, 2019 November 27, 2019 Hassan Istiila
Guddiga dib-u-eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa maanta horgeeyay fadhiga wadajirka ah ee baarlamaanka habraac ansixinta Qaraarka Dastuurka KMG oo ka kooban 11 qodob . Guddoomiyaha guddiga xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid, ayaa sheegay in fadhiga baarlamaanka ee sanadkan aan la xirin ilaa Dastuur laga ansixiyo. “Waxaan Baarlamaanka usoo jeedinayaa, shacabka Soomaaliyeedna oggeysiinayaa in kalfadhigan 6-aad aan la xirin ilaa shacabka Soomaaliyeed loo ansixiyo Dastuur sharciga waafaqsan. Haddii kale waxaa sanad kasta lagu jiri donaa Doorasho dadban, doorasho istaagan iyo doorasho jiifta”, sidaasi ayuu yiri guddoomiyaha. Guddiga…
Guddiga Baarlamaanka: Nidaamka matelaadda isu dheelitiran waa la diiday ee hala hirgeliyo nidaamka aqlabiyadda ah
November 27, 2019 Hassan Istiila
Guddiga uu golaha shacabka BF u saaray sharciga doorashada ayaa la yimid model cusub oo doorasho iyaga oo meesha ka saaray hannaanka doorashada nidaamka matelaadda isu dheelitiran ee liiska xiran, taa badalkeeda keenay Nidaamka Aqlabiyadda ah (Majoritarian System) kuna salaysan in kursi kastaba gaarkiis loo doorto (Single Member popularity “SMP”) ama habka loo yaqaan horreeyaa guuleysta (First Past The Post “FPTP”) oo lagu kala baxo codka haldheeriga ah ee tartanka kursi deegaanka. Qodobada Xiisaha badan waxaa ka mid ah: Waxa ay dhamaan dhinacyada kala duwana ee aan la kullanay walwal…
Xildhibaannada Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in ay yeeshaan kulan wadajir ah ku yeshaan magaalada Muqdishu. Kulankaan oo ah mid muhiim ah ayaa ajandihiisu yahay meel-marinta habraaca ansaxinta dib-u-eegista Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Guddiga soo diyaarinta dib-u-eegista Dastuurka ee Golaha Shacabka ayaa bilihii lasoo dhaafay waday kulamo wada-tashi ah kaas oo ku saabsan dastuurka. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ah mid KMG ah oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo kadibna afti Dadweyne loo qaado, si uu u noqdo mid rasmi ah.…
November 26, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaannada Golaha Aqalka Sare oo shalay kulan ay ku yeesheen xaruntooda waxa ay kaga hadleen Hindise sharciyeedka Hanti-dowrka Guud ee Qaranka. Kulfadhiga 6aad kulankiisa 16aad oo uu shir-guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayna joog ka ahaayeen Guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee Aqalka Sare Senator Abshir Maxamed Axmed iyo Guddomiye Ku-Xigeenka 2aad Senator Mowlid Xuseen Guhaad ayaa waxaa looga hadlay Hindise sharciyeedka Hanti Dhowrka Guud ee Qaranka. Senator Deeqa Xasan Xuseen Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Dhaqaalaha, Maaliyadda, Ganacsiga, Warshadaha, Isgaarsiinta iyo Dalxiiska Golaha Aqalka Sare…
Xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo kamid ah Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa kulanka Baarlamaanka ee maanta ka hor sheegtay in laga xanibay safar ay saaka ku tagi laheyd degmada Luuq ee Gobolka Gedo oo ah deegaan doorashadeeda. Xildhibaannada ayaa sheegtay in safarkaasi ay ka hor-istaagtay Hey’adda Nabad-sugida Soomaaliya. “Waxaan shalay oo aheyd Axad fasax weydiista guddoonka Baarlamaanka si aan ugu safro deegaan doorashadeyda. Waxaan aaday airport-ka Mogadishu, saacado kaddib ayaa waxaa la igu wargeliyay in airport-ka aan ka bixi karin, ayna i heysato Hay’adda Nabad-sugida iyo sirdoonka Qaranka”. “Waxaan…
November 25, 2019 Hassan Istiila
Maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta markale u fariisanaysa dhageysiga dacwadda u dhaxaysa Xisbiga Himilo Qaran iyo Hey’adda Duulista rayidka. Dacwadaan ayaa bishii la soo dhaafay waxaa Maxkmadda sare u gudbiyey Xisbiga Himilo Qaran oo uu madaxda ka yahay Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Dooda u dhaxeysa Xeer-ilaaliyaasha Qaranka iyo Garyaqaanada u doodaya Himilo Qaran ayaa dhawaan ka bilaaban doonta hoolka Maxkamadda ee dacwadaha lagu dhageysto. 18-ka bishaan ayay Maxkamadda sare markii u horeysay u fariisatay qaadista dacwadaan taas oo maanta markii labaad Maxkmaddu u fariisaneyso. Faahfaahin…
Xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Isniin ah waxaa kulanooda looga hadli donaan arrimo kamid ah Miisaaniyadda dowladda ee sanadkii 2019. Ajendaha kulanka ayaa ah Akhrinta 2aad ku Noqoshada Miisaaniyadda 2019, waxaana la filayaa in xildhibaannada ay aragtiyo kala duwan ay ka dhiibtaan. Waxa ay xildhibaannada ay akhrinta Labaad marsiin doonaan ku noqoshada miisaaniyadda dowladda ee sanadkaan, kaas oo horey loo mariyey akhrinta Koowaad. Wasiirka Maaliyadda ayaa la filayaa ama xubno ka socda wasaaradda in ay kulanka yimadaan si ay goobjoog uga ahadaan. Wasaaradda Maaliyadda ayaa…